Fanontaniana À propos de panneau hadihadiana de Boky Faha-de Flight simulator X etona.
fanontaniana Fanontaniana À propos de panneau hadihadiana de Boky Faha-de Flight simulator X etona.
1 taona 6 volana lasa izay #589 by CETIN
Mon problème c'est qu'après effectué avoir une Boky Faha-en FSX etona Quand j'appuie sur la bouton Echap, et je vais de l'Fakafakao de Boky Faha, je vois sur la graphique de la Hauteur de tongotra de l'avion mais je Ne connait pas de l'lavitra que j'ai parcouru fiara, je ne connais pas de l'hampiray de mesure indiqué.
Est de quelqu 'Un de Plus de moi, pourrais doué ahy-dalàna quel l'Est hiray hina de mesure.
1 taona 6 volana lasa izay #590 by Gh0stRider203
Efa tonga ny Forum anglisy. Faly aho manampy anao, fa azafady, amin'ny ho avy hampiasa teny anglisy.
Ve ianao niresaka momba ny varavarankely io ??
1 taona 3 andro lasa izay #815 by CETIN
Ny olako dia rehefa avy misidina amin'ny fiaramanidina FSX aho rehefa misotro ilay bokotra ESC ary mandeha amin'ny fandalinana ny sidina aho dia hitako ao amin'ny diagram ny haavon'ny tongotr'ilay fiaramanidina nefa tsy fantatro ny halavirana nandehanako satria tsy izaho Fantaro ny fepetra noraisina.
Moa ve nisy olona iray talenta kokoa noho izaho afaka nilaza tamiko ny dikan'ny vondrona famaritana.
11 volana 2 herinandro lasa izay #836 by Gh0stRider203
Ny halaviran-dalana dia US miles ao amin'ny FSX. Fantatro fa sarotra ny mahita, fa amin'ny farany, dia mahazo miakatra ny laharana
11 volana 1 herinandro lasa izay #845 by CETIN
Eny, fa izany ve no kilaometatra maromaro na avaratra?
11 volana 1 herinandro lasa izay #846 by Gh0stRider203
Dranomasina. (Nitranga in-1): Raha ny fahitako azy dia tsy maintsy misy fiantraikany eo amin'ny sehatra iraisam- Ny sidina rehetra dia hita ao amin'ny SkySimFlight koa, ary mampiasa kilaometatra maromaro koa izy ireo, noho izany dia miteny amin'ny marika aho.
Fotoana mamorona pejy: 0.158 segondra